မျက်မမြင်ခဝါကိုဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်မျက်မမြင်စာကိုစွယ်စုံသုံးခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ။ - ရောင်းချသူများသမဂ္ဂကုမ္ပဏီလီမိတက်
1. Shading, အိပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ နေရောင်များလွန်းသောကြောင့်သို့မဟုတ်အလင်း၏အလင်းသည်အလွန်တောက်ပသောကြောင့်မျက်စိကိုပိတ်ထားလျှင်ပင်၎င်းသည်အဖြူနှင့်တောက်ပနေ ဦး မည်ဖြစ်သောကြောင့်အိပ်ပျော်ရန်ခက်ခဲစေသည်၊ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်မျက်လုံးသုံးနိုင်သည် အလင်းရောင်ကိုဖုံးအုပ်ရန်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းညတွင်အိပ်စက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။
၂။ မျက်စိပင်ပန်းမှုကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်စာအုပ်များနှင့်ကွန်ပျူတာများကိုဖတ်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်နေကိုကြာမြင့်စွာကြည့်ခြင်းကမျက်စိနာကျင်မှုနှင့်နာကျင်မှုလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေအိတ်၏မျက်လုံးမျက်နှာဖုံးကို သုံး၍ အိပ်မောကျစေပြီး၎င်းသည်မျက်စိပင်ပန်းမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
၃။ မျက်လုံးရောင်ခြင်းကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း၊ အမျက်ထွက်ခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသမျှတို့၌သည်းခံ။ ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ကိုငါတို့သည်မြင်ရကြလိမ့်မည်။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ရေအိတ်မျက်လုံးမျက်နှာဖုံးကိုသုံးနိုင်သည်၊ ရေအေးအေးအအေးခံ။ ရေအိတ်ကိုယူနိုင်သည်။ ထို့နောက်ရေအိတ် ၀ တ်စုံများကကျွန်ုပ်တို့၏ puffiness ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
4. အပူကိုရေဖြန်းရန်ရေခဲကိုသုံးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောအဖျားရှိသည့်အခါသို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်မြင့်မားပါကအပူလွန်ကဲမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုရရှိရန်နဖူးပေါ်တွင်ရေခဲသေတ္တာရေအိတ်မျက်လုံးမျက်နှာဖုံးကိုလည်းသုံးနိုင်သည်။
5. နာကျင်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရာသီရာသီလာပြီ၊ ရေအိတ်ကိုအပူပေးရန်လည်းအပူကိုယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဝမ်းဗိုက်တွင် ကပ်၍ ၎င်းသည်ရာသီသွေးဆင်းခြင်းနှင့်နာကျင်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။